Ngaba ibranti yakho yokuqalisa ilungele i-CES? Uluhlu lokuKhangela oluBalulekileyo lwamaXesha okuQala | Martech Zone
Ngaba ibranti yakho yokuqalisa ilungele i-CES? Uluhlu lokuKhangela oluBalulekileyo lwamaXesha okuQala
NgoLwesine, Novemba 2, 2017 NgoLwesine, Novemba 30, 2017 UPamela Webber
Ngokuqinisekileyo uvile amabali avela kwimigca engaphambili kwaye uzithobele izilumkiso ezivela kubahlobo kunye noogxa bakho. Kodwa ukuba ungomnye wamawaka osomashishini ababhalise ukuzimasa impambano kaJanuwari yonyaka eyaziwa ngokuba yi-CES (Umboniso woMbane weeMveliso) eLas Vegas okokuqala ngqa kulo nyaka (nge-9 ukuya ku-12 kaJanuwari), kunokuba nzima ukuba nombono wezinto ezizayo.
Ungathini ngale nto: Khawufan 'ucinge ngeholo yebhola ekhatywayo eyakhiwe ngobukhulu kwiholo egcwele izilwanyana ezinxibe i-lanyard, oosomashishini abanxibe ezembatho zibhadule phakathi kwamawaka eminquba kunye neetafile ezifuna ukuqatshelwa. Ngaphakathi kwindimbane, ngokukhwaza, kwimibala eqaqambileyo evela kweyona nto inkulu ehlabathini - cinga ukuba uSony, uSamsung, iFord kunye nokuninzi- banokuphakama ngaphezulu kwedin, njengoko I-87% yababonisi kwi-CES ziinkampani ze-Fortune 100. Okwangoku, amakhulu abanye aya kugcina imiqondiso kuyo yonke indawo iliso linokubona kuyo, ukusuka kwiindawo zokuhlambela ukuya kubanini bekomityi yekofu nayo yonke into ephakathi.
Ukuba ufana nokuqala, awuzukufumana sibonelelo sebhajethi enkulu kumgangatho weziko lendibano (elinokubiza ngaphezulu kwe- $ 50K i-10 × 10 idokodo). Ukuba uyisiqalo esitsha ngohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, unokujonga enye indlela efikelelekayo ngakumbi enje Ipaki ye-Eureka - indawo enikezelwe ngokukodwa ukuqala, itafile kwenye yemiboniso yeendaba zasebusuku ezinje Iishawa zokubonisa, okanye nditsho nokugcina isuti kwenye yeehotele ezikufutshane neziko lendibano.
Nangona kunjalo, into onokuyenza-kwaye kufuneka uyenze ubuncinci kukuqinisekisa ukuba uphawu kufuneka ubonise xa udibana naye nabani na apho, nokuba ungowomnquba, etafileni okanye udlula nje kumgangatho wokubonisa, wenza olona phawu lubalaseleyo kunokwenzeka.
Apha ngezantsi kukho amathambo angenanto, uluhlu lokutshekisha olusisiseko lokuqinisekisa ukuba inkampani yakho ilungele ukudibana nabantu e-CES kulo nyaka.
Ungayi entlanganisweni ebizwa ngokuba yi-CES? Uninzi lweengcebiso ezingezantsi zisebenza kuyo nayiphi na into ebalulekileyo kushishino apho inkampani yakho izakuya khona kulo nyaka. Njengoko sonke sisazi, ukubonisa okanye ukuya nje kwi-network ye-tradeshow yinto ebiza kakhulu, ke kusengqiqweni ukwandisa ubukho bakho ngokubeka olona nyawo lwakho luphawu luhamba phambili.
Izinto ezinophawu oluhambelanayo ezivela kwilogo yakho ezantsi - Qinisekisa ukuba une-logo yobungcali, entle kunye nezikhokelo ezinokuthi zilungelelaniswe nayo yonke into ebambekayo, isambatho, kunye neempawu ofuna ukuzenza. I-logo yesiko eyilelwe ukulingana inkitha yezicelo iya kunceda uphawu lwakho luphume, nakwisiganeko esinjenge-CES.
Ukugqibelela okwangoku, ilogo yoyilo lwezicelo ezininzi. Uyilo loyilo ngu-blancetnoire weMali Jar.
Hlaziya ubukho bakho kwi-Intanethi- Ngaphambi kokuba ungene kwiVegas, qiniseka ukuba iwebhusayithi yakho ihlaziyiwe (ulwazi oluchanekileyo nolukhoyo ngoku, indawo yokushicilela egubungelayo kunye nokukhutshwa kweendaba, njl. Ingumbono olungileyo ukuqinisekisa ukuba amajelo akho entlalontle ayahlaziywa kwaye umntu othile okwisiza ujongana nonxibelelwano kwimpelaveki yonke.
Ukuba uthengisa imveliso yanamhlanje kunye nezinto ezintsha, qiniseka ukuba iwebhusayithi yakho ihlaziyiwe kwaye iyaphendula. Uyilo lwewebhusayithi nguDenise M.
Itheyibhile okanye iBooth Signage kunye neZibonelelo - Ukuba ucwangcisa ukubonisa iimveliso okanye iisampulu kwitafile yakho, cinga ngokwenza umqondiso omncinci wokuqondisa ababekho kuzo. Ngaba unenguqulo ye-beta yemveliso yakho kwabo baya kuyo ukuze bavavanye? Faka olo lwazi apha. Ngaba ufuna ukunika abantu abazimeleyo ikhowudi yokunyusa? Gcina imali kwikhadi leposi elinemibala emine kwimithombo yeendaba nakwabanye ukuba bathathe kwindawo yakho ukuze ungalahleki.
Imiqondiso - Xa kuziwa kumqondiso, qiniseka ukuba ufunda ubungakanani ekufuneka usebenze nabo kwitafile ethile okanye kwindawo ebekekileyo oyigcinileyo. Kusenokwenzeka ukuba usebenza ngendawo encinci kwaye awuyi kuba nodonga lokuncamathisela ibhena kuyo. Oko kuthetha ukuba uyakufuna ukufumana iibhena ezimileyo simahla. Eminye imithombo efikelelekayo yoku: Iimpawu eziKhawulezayo kwaye Ibonisa2go. Xa usenza umqondiso wakho, xhathisa umnqweno wokucinezela lonke ixabiso lesicelo kwinkampani yakho kwindawo eprintiweyo kangangoko; ilogo yakho kunye nomgca wethegi olula, ongalibalekiyo ofundeka mgama usebenza kakuhle.
Izipho - Ukunika ithuba lithuba lakho lokuyila. Cinga ngezinto abantu abazifunayo nabazidingayo kwezi ndidi zeziganeko. Akunyanzelekanga ukuba ibe nobukrelekrele obukhulu- uya kukhunjulwa ngcono ngokunika into enexabiso kunye nokucinga ngezidingo zomsebenzisi kuqala. Cinga i-breath mints, iibhegi zokuthwala ukuphatha i-swag, okanye iincwadana. Ngaphandle kwexesha? Awungekhe uhambe gwenxa ngeelekese njengokuzoba kumnquba wakho.
Umboniso wevidiyo - Ukuba uthatha isigqibo sokubonisa ividiyo kwibhokisi yakho, uyakufuna into ethi ithathe ingqalelo yabantu kwaye ayixhomekeki kwisandi (kuba inokuba iya kukhwaza kakhulu eholweni). Ividiyo yakho kufuneka ikwazi ukuzimela yodwa ngokubonakalayo kunye nokubhaliweyo. Apha kulapho akufuneki woyike ukwenza uyilo- konke malunga nokufumana iindlela ezintsha zokutsala umdla wokuqalisa incoko.
Isinxibo - Ubuncinci, jonga ukujonga ubuchule kunye nesitayile. Ukuba ungaphuma entwasahlobo ukuze uthelekise, iihempe ezinophawu okanye ihempe zabasebenzi boothokotho bakho, yenza njalo. Iya kwenza amava kunye negama lakho ukudayala ungene ngaphakathi kwaye ukhumbuleke.
Izixhobo zeDijithali - Beka ndawonye ikhithi yakho yemidiya yedijithali. Ufuna ukuba ilungele intatheli ukuze zingalindi kwaye ungaphoswa nawaphina amathuba. Kuya kubandakanya ulwazi lwenkampani, ikhadi lakho leshishini, ii-specs zemveliso kunye nolwazi, iilogo, imifanekiso, ulwazi loqhakamshelwano, nayo nayiphi na into ocinga ukuba intatheli inokuyifuna. Ingcinga efanelekileyo yokuba zonke ezi zinto zifumaneke kwi-intanethi kwaye zibandakanye ikhonkco kule khithi yokushicilela kwikhadi lakho loshishino.
Cards Business - Siyazi, siyazi… ngo-2017 kwaye sisathetha ngamakhadi oshishino. Kodwa kwiminyhadala efana ne-CES, lo mqondiso ubonakala ngathi uphelelwe lixesha usenokuba yeyona ndlela ibalaseleyo yokukhumbuza abafowunelwa abatsha ukuba banxibelelane emva komsitho (kwaye emva koko ulahle ngokukhawuleza ikhadi lakho leshishini emgqomeni wokurisayikilisha). Ngale nto engqondweni, cinga ukuvuselela eyakho ngaphambi komboniso, kwaye uqiniseke ukuba wonke umntu oya kwinkampani yakho unokunikezela okuninzi. Qiniseka ukuba ushiya indawo emhlophe ekhadini ukuze umamkeli azibhalele inqaku emva kwentlanganiso yakho - ecaleni kwemigca “ungalibali ukuthumela lo mntu!”
Ikhadi leshishini lesitayile elingaqhelekanga, eliya kukhumbuza nabani na ngophawu lwakho kunye neshishini. Uyilo lwekhadi leshishini ngePlatinum78 yeDais.
I-CES lithuba legolide malunga nayo nayiphi na itekhnoloji yabathengi, kuba iimveliso ezininzi kolu didi zinobukho obomeleleyo apho. Lisebenzise eli thuba ngokulungiselela umsitho. Awuyi kufumana kuphela ngaphandle kwe-CES, uyakonwabela inkomfa ngakumbi.
tags: 2017isinxiboimiqondiso indlwanaizinto zokubeka uphawumakhadi o shishinoEziutywalanikaikhithi yemidiya yedijithaliipaki ye-eurekaneziphologoingqayi yemaliimalijarIwebhusayithi entshaIwebhusayithi ephendulayoumbonisomqondisoimiqondiso yetafiletech iwebhusayithiividiyo yevidiyowebsitesebenza
U-Pamela Webber liGosa eliyiNtloko leNtengiso e 99designsYeyona ndawo yentengiso yoyilo inkulu ehlabathini. Kwi-99designs, uPamela ukhokela iqela lokuthengisa elinoxanduva lokuqhuba ukufunyanwa kwabathengi kunye nokunyusa ixabiso lokuphila kwabathengi. Ukongeza kumava akhe njengomthengisi, uPamela uzisa amava amaninzi njengosomashishini we-ecommerce kwaye esebenza neziqalo ezikhula ngokukhawuleza.
I-Lilt: I-Neural yoLuntu + yoMatshini oPhendulayo ngeLoop yoGuqulelo kunye neNdawo